Clickfunnels masaf Shirt - Funnel Of The Day
Tan waxaad isticmaali kartaa dublad si aad u iibiyo waxyaabaha jirka, waxaad u isticmaali kartaa in ay iska iibiso dharka.
Aasaasidda Clickfunnels masaf maaliyada waa hab fiican si ay u muujiyaan in aad wax soo saarka ugu dalab kooban bogga caga a.
Waxaad samayn kartaa qurbaanka la soo jiidasho ay ku daray qaar ka mid ah faahfaahinta nasoo sida loogu tirec yaraanta, iyo dib u eegis ka macaamiisha ku qanacsan.
dublad waxay u ogolaadaan in aad sameysato qurbaan la isticmaalayo tikidhada taageero in la ogeysiin email shaqeeyaan, sidaa darteed waxaad samayn kartaa barnaamij dhiirrigelin halkaas oo macaamiisha aad waxaa lagu Abaal marin karo oo ag maraya hore in la iibiyo.
Sida qalab suuq tagaa, dublad kuwani waa mid aad u faa'iido leh!
P.S. ­ Tani waa mid ka mid waqti dalab 14 maalinta maxkamadda…